Sary Sobika Antsirabe sy sary nindramina
Nentina novonjena tao amin’ny hopitaly Andranomadio ireo naratra ka roa no maty teo ampahatongavana ary roa hafa indray taorian’ny fandraisana azy ireo. Olona 9 hafa manaraka fitsaboana akaiky noho ny dona mafy tamin’ny lohany ka ny 3 amin’ireo dia mbola ahiana ny ainy.
Tafakatra 7 izany no namoy ny ainy tamin’ity lozam-pifamoivoizana ity izay miaramila sy ny vadiny ary ny zanany vavy 7 taona no telo tamin'izany. Voa mafy ihany koa ny mpamily ilay kamiao, izay nalefa notsaboina any Antananarivo. Marihina fa 21 ny mpandeha tao anatin’ity spriter ity.
Will Mobic Make You Gain Weight Zithromax Label [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Kamagra Oral Dolor De Cabeza
lundi, 23 octobre 2017 04:07
Le Viagra Pour Les Jeunes Levitra Ou Cialis Forum Priligy Dauer [url=http://cheaplevi.com]levitra super pro[/url] Provental Inhaler Without A Script
mercredi, 04 octobre 2017 22:18